प्रश्न सोध्दा मतदाता कुट्ने ईश्वर पोख्रेललाई जनताले मत दिन्छन् जस्तो लाग्दैन (भिडियोसहित) | नेपाल आज
प्रश्न सोध्दा मतदाता कुट्ने ईश्वर पोख्रेललाई जनताले मत दिन्छन् जस्तो लाग्दैन (भिडियोसहित)
बुधबार, ०६ मङि्सर २०७४ गते प्रकाशित
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट यसपटक प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् सो पाटीका संयोजक उज्वल थापा । थापा यसअघि स्वतन्त्रबाट कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर संविधान सभा निर्वाचनमा होमिएका थिए । भर्खरै जन्मेको यो पार्टीको धेरै ठूलो अपेक्षा यसपटक पनि छैन । यसपटक यो पार्टीले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पायो भने त्यही ठूलो हुनेछ । संयोजक थापासँग हामीले गरेको कुराकानीका क्रममा उनले चुनाव आफूले जित्ने दावी गरे । उनीसँग भएको कुराकानीको सार निम्नानुसार छः
‘मेरो आइटी कम्पनी थियो । त्यो बेला राजा ज्ञानेन्द्रले इन्टरनेट काटिदिनु भयो । म झन्डै सडकमा आए । मेरोमा काम गर्ने ३० जना साथीहरु पनि त्यस्तै भए । उनीहरुले पछि आ आफैले आइटी कम्पनी खोले । काम गर्दै जाँदा महसुस भयो कि राजनीतिको वातावरण सफा नभएसम्म गरिखाने अवस्था नहनुे देखियो । १६ घन्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । मेलम्चीको पानी अझै आएन । यसो किन भयो भनेर हामीले घोत्लेर कारण खोज्यौं । थाहा पायौं कि अयोग्य मानिसले राजनीतिमा होल्ड गर्दा खेरी सक्षमहरु ओझेलमा पर्दा रहेछन् । गलत नियत र असक्षम मानिसहरुले राज गर्दा रहेछन् भन्ने थाहा भयो । त्यसपछि म राजनीतिको फोहोर सफा गर्न भित्र पसेँ ।
हामी राजनीतिमा आएको परम्परागत शक्तिप्रतिको वितृष्णा मात्रै होइन । हामी यो देशको राजनीतिलाई ठिक निर्देश गर्न पनि आएका हौं । विश्वको प्रमुख ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चीन हाम्रो छिमेकी हो । भारत पनि उदयीमान राष्ट्र हो । यति विशाल अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा बसेर हामी सधै गरिब भइरहने कुरा हुँदैन । हाम्रो देशमा आधा भन्दा बढी मानिस २२ वर्ष मुनीका छन् । प्रत्येक पाँचमा चार नेपाली १ जना ४५ वर्ष भन्दा कम उमेरका छन् । देश बनाउने ५० लाख युवा विदेशमा छन । जसले देश बनाउनु पर्ने हो उनीहरु विदेशमा छन् । यस्तो किन भइरहेको छ भने नेपालको विकृत राजनीतिले यसो गरिरहेको छ । हामी यहि राजनीतिमा परिवर्तन गर्न चाहन्छौं । यसैका लागि आएका हौं । राष्ट्रको स्वाभीमान जोगाउन अगाडि बढि रहेका छौं ।
म धेरै बोल्ने नेता होइन । काम गर्ने नेपाली दाजूभाईको एक सहयोगी मात्रै हो । हाम्रो जटिल शिद्धान्त पनि छैन । तर सुशासनका लागि जे हुनुपर्ने हो त्यो छ । हामी सबैभन्दा बढी पारदर्शीतामा विश्वास गर्छौं । अहिलेको राजनीति यति धेरै अपारदर्शी छ कि यो वातावरणलाई हामी परिवर्तन गर्छौं । हामी राजनीतिलाई पेशा बनाउँदैनौं । हाम्रो कन्सेप्ट के हो भने समाजसेवा गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम राजनीति हो । यसलाई हामी सदुपयोग गर्छौं ।
भूकम्प जाँदा हाम्रो टिम ३० मिनेटमा टिचिङ अस्पताल पुगेर सेवामा खटिन थाल्यो । तर एक हप्तापछि फर्केर हेर्दा पुराना भनिएका दलहरु त त्यो बेलासम्म आएकै रहेनछन् । हामी त्यो बेला गोर्खादेखि सिन्धुपाल्चोक पुगिसकेका थियौं ।
हामीलाई कतिपयले हाम्रो काम एनजिओ जस्तो भयो भन्छन् । गान्धीले लगौटीका भरमा ब्रिटिशलाई हल्लाएकै हुन् । त्यो बेला पनि गान्धीलाई यस्तो एनजिओको शैलीको आन्दोलन सफल हुँदैन भनेका थिए होलान । तर उनले अहिंसालाई नै सबैभन्दा ठूलो अस्त्र बनाए । चीनका देन जाओ पिङको उदाहरण हेर्नुहोस् । बिरालो जस्तो भए पनि मुसा मारे पुग्छ । नेपालमा ४६ सालयता कैयन एनजिओ खुले । उनीहरुले धेरै विकृति ल्याए । आज त्यही एनजिओसँग बानी परेकाहरुले हामीलाई औला ठड्याउन मिल्छ होला र ?
सयौं भेडालाई एउटा कुकुरले नियन्त्रण गर्छ । हामी पनि यसपटक सानो हैसियतमा रहन सक्छौं । संसदमा हाम्रो प्रतिनिधित्व मात्रै भयो भने पनि हामी वाचडगकको काम गर्छौं । संसदका बाँकी भेडालाई तह लगाउँछौं । खराब नीति, खराब मस्यौदा आएको बेला हामी नियन्त्रण गर्छौ । हामी संसदमा नहुँदा पनि हामीले गोविन्द केसीलाई समर्थन गरेरे कानुन फेर्न दबाब दियौं । लोकमानको अधिनायकवादविरुद्ध पनि हामी क्रियाशील बन्यौं ।
काठमाडौ ५ बाट म उठेको छु । काठमाडौंका नागरिकहरु यो क्षेत्रबाट वाक्क भइसकेका छन् । उहि पुरानै नेता, पुरानै संस्कार छान्दा छान्दा यस क्षेत्रका मतदाताहरु वाक्क भएका छन् । यस क्षेत्रका मतदाताले यसपटक विकल्प खोज्नु हुनेछ ।
मेरो क्षेत्रका वामगठबन्धन र कांग्रेसका उम्मेदवार मेरा प्रतिस्पर्धी होइनन् जस्तो लागेको छ । किनभने मरो राजनीति निष्ठाको छ । हाम्रो नियत सफा छ । हामी राजनीतिलाई माध्यम बनाएर व्यापार गर्न आएका हैनौं । मेरो जस्तो नियत लिएर यहाँ अरु आएको जस्तो लाग्दैन । यसकारण उहाँहरु मेरो प्रतिस्पर्धी होइन । मसँग प्रतिस्पर्धा गर्न त मेरो जति नै नैतिक बल हुनु पर्यो नी ।
मेरो क्षेत्रबाट वामगठबन्धनबाट नेकपा एमालेका महासचिव र्इश्वर पोख्रेल उठ्नु भएको छ । महासचिव जस्तो मान्छेले कस्ता मान्छेलाई आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार बनाउनु भयो ? नियालेर हेर्नुहोस महासचिव ज्यूले आफ्नो पार्टीबाट गुन्डा, डन माफियालाई टिकट दिनु भएको छ । यस्ता मान्छेले नैतिकतासँग युद्ध गर्न सक्छन् ? अनैतिक बलले नैतिक बललाई पराजित गर्न सक्ला ? काठमाडौंको मेयर छानेको पनि हेर्नुहोस् । कस्तो भएको छ काठमाडौंको दूर्दशा । ईश्वर पोख्रेल राजाको शासन भएको बेला प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर मन्त्री हुन जानु भएको हो उहाँ ।
मन्त्री भइसकेपछि पनि तेल काण्ड मच्चाउनु भयो, कडा प्रश्न सोध्यो भनेर कुटपिट गर्नुभयो । कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत आफै ऊर्जामन्त्री भएको बेला १६ घन्टा लोडसेडिङ थियो । अचम्म त यो लाग्छ कि कुन नैतिक बलले उहाँहरु चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ ?
ईश्वर पोख्रेललाई दुई दुई पटक काठमाडौंका जनताले हराएका थिए । नरहरिले केही काम नगर्दा पनि इश्वरको सट्टा नरहरि नै जनताले रोजे । पहिले त विकल्प थिएन । अब त विकल्प छ । अब त हामी विकल्पका रुपमा आएका छौं । त्यसकारण हामी जित्छौं ।’